မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XXVII | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XXVII
မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XXVII
Posted by Kyaemon on Nov 20, 2016 in Arts & Humanities, Business & Economics, Education, Think Different |4comments
Bank official: Rich should not deny dams to the poor
(“Brazil ဆီက အတုယူစရာ”ကိုလဲအောက်နားမှာ တင်ပြထားပါကြောင်း)
ကမ႓ာ့ဘဏ်အရာရှိကဆို။။. ဆင်းရဲနိုင်ငံတွေကရေကာတာလုပ်တာကို ချမ်းသာနိုင်ငံတွေကလိုက် မ တားသင့်ပါ
၂၀၀၆ စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်
(ရှေ့ဆောင်းပါး # ၂၆ က John Briscoe လဲ ကမ႓ာ့ဘဏ် ရေဘက်ဆိုင်ရာအဆင့်မြင့်အကြံပေးအရာရှိပါ၊ခုGrey ပြောတာကဒီသဘောဘဲ)
Rich countries should not keep less developed ones poor by fashionable trends that oppose dams and water management infrastructure,atop World Bank water resources chief says.
ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေကပေကြိုး စည်းကမ်းသစ် (ဝါလုံး)နဲ့ ဟန့်တား ဘို့ မလိုကြောင်း၊
ကမ႓ာ့ဘဏ် ရေဘက်ဆိုင်ရာအဆင့်မြင့်အကြံပေးအရာရှိ ချုပ် David Grey ကဆိုပါတယ်၊(ချမ်းသာနိုင်ငံလုပ်ပုံကဒီလိုပါ၊မိမိတို့ထောက်ပံ့ထားတဲ့ International Rivers တို့လို NGO
တွေနဲ့ဒေသခံလူတွေကိုလိုက်”စည်းရုံး”ပြီး”သက်ဆိုင်ရာကို “အကြပ်ကိုင်”တာကိုဆိုလိုတယ်၊ Grey က အထက်ပါလိုပြောတာက ၁ဝ နှစ်တောင်ကျော်လာပါပြီ။ဆရာဦးထွန်းလွင်တို့
ထက် ၅နှစ်စောပြီးပြောတယ်၊ ဒီလိုကမ႓ာ့ဘဏ်ကထိပ်သီးပါရဂူတွေရဲ့စကားတွေကိုလျစ်လျူရှုမိတာက မတော်သင့်ပါ)
David Grey, senior water adviser at the World Bank, said developed countries have been taking too broadabrush to dams and keeping poor countries poor in the process.
ကျနော်တို့ချမ်းသာအောင်လုပ်နည်းအတိုင်း ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေက လိုက်လုပ်တာကို “မလုပ်ရဘူး” လိုက်ပြောနေကြတယ်လို့
စက်တင်ဘာ ၄ ရက် Australia Brisbane မြို့ က အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမြစ်ကြောင်းကွန်ဖရင့်မှာDavid Grey က ပြောပါတယ်၊
“We’re telling them (poor nations) not to do what we did in order to get rich ourselves,” Grey said September4in Brisbane, where he addressed the ninth annual International River symposium conference.
မြစ်ရေတွေကိုကွပ်ကဲထိန်းသိမ်းဘို့ ရေကာတာ နဲ့ ရေအဆောက်အအုံကိုတည်ဆောက်ကြ
တယ်၊နာရီ လျှာလိုရေကာတာတွေက တကြော့ပြန် ခေတ်စားလာတယ်၊ ပိုပိုပြီးလက်ခံလာ ကြတယ်၊
ဒီအတွက် ကမ႓ာ့ဘဏ်က ရေ ကွပ်ကဲထိန်းသိမ်းမှုငွေချေးပေးဘို့ဆုံးဖြတ်၊ခံဝန်ပြီးသားပါ၊
(ဖော်ပြသလို ၂၀၀၆ ကမ႓ာ့နှီးနှော်ဖလှယ်ပွဲမှာ Grey ကလူသိရှင်ကြားမိန့်ကြားခဲ့တယ်၊ဆရာ ဦးထွန်းလွင်ရဲ့
၂၀၁၁ မိန့်ခွန်းထက် ၅ နှစ် စောတယ်၊တယောက်တပေါက်ပါ၊
တဦးကရေကာတာ ကိုအားပေးတယ်၊တဦးက ရ လုံး စလုံးရပ်ပြစ်ဘို့ပြောတယ်၊ တဦးကခေတ်စားလာတယ်၊
တဦးက ၅ နှစ်ကြာ ခေတ်မစားတော့ဘူးပြောတယ်၊ ဘယ်သူကရေကာတာ အကြောင်းကိုပိုပြီးနားလည်မလဲ?
ပြီးတော့ ရေကာတာဆောက်ရင် မြစ်ကောမယ် လူတွေငတ်မယ်ရေကာတာပြိုကျမယ်
ဆိုရင် ကမ႓ာ့ဘဏ်ကရေကာတာတွေ အတွက် ဘာကြောင့် $ သန်းချီချေးငွေ ထုတ်ပေးနေ တာလဲ?)
“မျက်ကန်း ၆ ဦး နဲ့ ဆင်တကောင်” ပုံပြင် လို တဦးဦး က “ကွက်” ပြီးမြင်တာ “ကွက်”ပြီးပြောတာ၊
လွှတ်သွားတာ၊ခြုံငုံပြီးမကြည့်မိတာကြောင့် အဖြေမှန် မ ရလိုက်တာဖြစ်ဘို့များတယ်၊သေချာ
,,,,And so these men of Indostan
Grey said the pendulum is swinging back toward greater acceptance of dams and water infrastructure as part of the overall management of water. He said the World Bank is committed to financing responsible water development.
Poor nations have 20 to 30 percent of needed storage
A Columbia University seasonal storage index, which shows the amount of water needed to produce food and to serve other areas of the economy, shows that most poor countries have only 20 to 30 percent of the storage they need. Grey said rich countries are “over-invested” at 200 percent.
ဆင်းရဲနိုင်ငံတွေက မိမိတို့လိုအပ်တဲ့ရေတွေရဲ့ ၂ဝ % မှ ၃ဝ % ထိသာသိုလှောင်နိုင်ပြီး
ချမ်းသာနိုင်ငံက ၂၀ဝ % နဲ့ (လိုတာဟက် တစ် ဆ)ပိုပြီးရေတွေကိုသိုလှောင်နိုင်ကြောင်း
ရေအလုံအလောက်ရရင် စိုက်ပျိုးရေးအောင်မယ် လူတွေချမ်းသာမယ်ဖြစ်လို့
(ရေကာတာဆောက်တာကို မ ကောင်းကြောင်းပြောသူတွေသိသာရန်မှာ
တကယ် ဘက်စုံအောင် တတ်တဲ့ ကမ႓ာ့ဘဏ်က ကျွမ်းကျင်သူ ၂ ဦး
ရှိပြီနော်၊ လုပ်သက်ဝါရင့်တဲ့အကြီးတန်း အကြံပေး အရာရှိတွေပါ၊
ကမ႓ာ့ဘဏ်ရော သူတို့၂ ဦးစလုံး ပါ ရေကာတာကို အားပေးကြ
တွေတင်မယ်၊ ဆိုရင် ဘာကြောင့် ဂျပန်ဆီကနေ ဆည်တွေရေကာတာတွေကို
ပြုပြင်မွမ်းမံဘို့ နှစ်စဉ် $ သန်းချီ ချေးယူရတာလဲ?၊ ဒီဟာကြတော့ ဘာဖြစ်လို့
ရေငုံနေကြတာလဲ ဆရာကြီးတို့? စဉ်းစားစရာ ပါ)
Grey said he sees large dams as the solution of last resort, because they invariably entail social and environmental damage. But popular participation, better governance, and sharing benefits can make dams important assets, he said.
Brazil ဆီက အတုယူစရာ
Brazil အရှေ့မြောက်ဘက်ပိုင်းမှာ ဒေသခံတွေက မိမိတို့ရဲ့ဒေသကို လာပြီးရေကာတာတည်ဆောက်ဘို့လိုလားကြတယ်၊
တဒေသနဲ့တဒေသ အချင်းချင်း အလုအယက်ပြိုင်ဆိုင်ပြီးဘိတ်ခေါ်ကြိုဆိုကြတယ်၊
(တော်တော်ဆန်းပါတယ်၊ မြန်မာပြည်အပါအဝင် အရှေ့တောင်အာရှတဝှိုက် ဥပမာ Cambodia, Malaysia ရှိ ဒေသ တော်တော်များများနဲ့တခြားစီပါလား)၊
အကြောင်းမှာ သက်ဆိုင်ရာ ဒေသခံတွေ ကို (သူစိမ်းလိုမဟုတ်ဘဲ မိသားစု)
“အစုဝင်”(ပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် ပိုင်ရှင်နီးပါးလို)သဘောထားဆက်ဆံကိုင်တွယ်ကြ တာပါ၊
လျှပ်စစ်ရောင်းရငွေရဲ့ ဝ.၅ % မှ ၁.ဝ % အထိ ကို အဲဒီဒေသခံတွေ အတွက်
ဖွံ့ဖြိုးစာရိတ်ရံပုံငွေ ဆိုပြီး ချီးမြှင့်တယ်၊စာသင်ကျောင်း လမ်း ဆေးခန်း ဈေး တွေ
အနှစ် ၅ဝ ထိ ချီးမြှင့်ဘို့ လုပ်ထားတယ်လို့ပညာရှင် Grey က ဖောက်သယ်
သာဓု သုံး ကြိမ်ခေါ်တယ်နော် ဆရာကြီးတို့၊နတ်လူကြားကြားသမျှပါ
“In northeast Brazil today communities compete to be the site of the next dam because it’s like living onagold mine,” he said.
ပြိုင်ဆိုင်ကြတာကရွှေတွင်းကြီးပေါ်ထိုင်မိရက်သားဖြစ်လို့တင်စားပြီးGrey ကပြောပါ တယ်၊
Communities are equity shareholders and receive benefits for 50 years, with 0.5 to 1 percent of power revenues financing community development funds, markets, schools, roads, and clinics, he said.
Grey: Without dams, Australia would not be rich
Australia, the driest inhabited country in the world, would not be the rich, developed country it is today if dams and water infrastructure had not been built, Grey said.
ခုလို ဖွံ့ဖြိုးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံမဖြစ်နိုင်လို့ Grey ကပြောပါတယ်၊
တခြားစီပါလား၊ ဘယ်လိုလဲ? မရှင်းလို့ပါဆရာကြီးတို့)
“Countries that have only one short rainy season … and countries where rainfall varies from year to year by 30 to 40 percent … these are the poorest in the world,” he said. “Australia is an exception. Australia imported skill and imported capital and solved the problem. If Australia hadn’t been colonized it might be different,” he said.
တုန်းက $ ၁.၅ ဘီလျံကုန်ကျပြီး မြစ်တွေကိုပြုပြင်တယ်လို့ Grey က
ပြောတယ်၊ရေကာတာတွေအားလုံးဖြုတ်ကြည့်ပါလားလို့ Grey ကမေး
လုပ်ပြီးရေငတ်တဲ့မြို့တွေကို မလွှဲမသွေ ရေပို့ရတဲ့သဘော)၊
ဒီနေရာပြောရမှာက Australia ဟာ တော်တော်များများနေရာကပူပြင်းတဲ့သဲ
Salinization and reduced flows in Australia’s major rivers led to the Australian government introducing the A$2 billion (US$1.5 billion) National Water Initiative in 2004, which has had some success in bringing major rivers back to life. But the use of dams before, and as part of the initiative, were blamed for damaging Australia’s river systems.
“And if you took them (the dams) all down, what would happen?” Grey asked.
Australians, battling longstanding dry weather that hit hardest in 2002 with the country’s worst drought in 100 years, have been forced to accept water restrictions in major cities as reservoir levels dropped to about 40 percent of capacity. Such hardship, according to Grey, is small compared with the plight in countries with limited water infrastructure.
Economics of Hydropower
ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ် ရေအားဆိုရင် ၁ cent၊ အနုမြူ အားဆိုရင် ၂ cent၊ မီးသွေး အား (နဲ့ရေနွေးငွေ့) ဆိုရင် ၃ cent၊
Hydropower is the cheapest way to generate electricity today. No other energy source, renewable or nonrenewable, can match it.
Today, it costs about one cent per kWh (kilowatt-hour) to produce electricity atatypical hydro plant. In comparison, it costs coal plants about three cents per kWh and nuclear plants about two cents per kWh to generate electricity. Producing electricity from hydropower is cheap because, onceadam has been built and the equipment installed, the energy source—flowing water—is free.
Hydropower’s lifespan is one major advantage as electricity can be generated consistently for decades without using up any raw materials.
တင်သွင်းတာခြင်း load factor တူတူ ရေအားက လျှပ်စစ်စွမ်းအားကိုပိုထုတ်ပေးနိုင်
Hydropower’s load factor of between 40 – 60% is very attractive for electricity generation especially when compared to the 15 – 40% obtained from Wind and Solar Energy.
Often, lakes form behind the dam which can also be used for irrigation, leisure, tourism, water sports.
ရပ်လိုက်သွားလိုက် ပြတ်တောက်ပြတ်တောက် ဖြစ်ကြတဲ့လေအားလျှပ်စစ် တို့ နေရောင်ခြည်လျှပ်စစ်တို့
Storing water behind dams hasaunique advantage of positioning hydropower as support of Solar and Wind Energy systems which are naturally intermittent. Hydropower doesn’t need to be used at full capacity all the time, but can be ramped up at times when other methods aren’t working or when demand is high.
Water power offersanumber of advantages to the communities that they serve. Below are just some of the benefits that hydropower has over other methods of providing energy.
Advantages of Hydropower:
Hydropower is fueled by water, so it’saclean fuel source, meaning it won’t pollute the air like power plants that burn fossil fuels, such as coal or natural gas.
Hydroelectric power isadomestic source of energy, allowing each state to produce their own energy without being reliant on international fuel sources.
စီးဆင်းရေက မကုန်းခန်းနိုင်၊နေကြောင့် အဖန်တလဲလဲ ပြန်ရလာနိုင်
The energy generated through hydropower relies on the water cycle, which is driven by the sun, making itarenewable power source, making itamore reliable and affordable source than fossil fuels that are rapidly being depleted.
Impoundment hydropower creates reservoirs that offeravariety of recreational opportunities, notably fishing, swimming, and boating. Most water power installations are required to provide some public access to the reservoir to allow the public to take advantage of these opportunities.
လျှပ်စစ်ထုတ်ဘို့ချက်ချင်း စ နိုင် အမြင့်ဆုံး အရှိန်ထိ အမြန်ဆုံးတက်နိုင်
(ဓာက်အားကျချိန် မှာချက်ချင်းပြန် နိုး နိုင်)
Some hydropower facilities can quickly go from zero power to maximum output. Because hydropower plants can generate power to the grid immediately, they provide essential back-up power during major electricity outages or disruptions.
ဆည်လုပ်ငန်းလုပ်နိုင်၊ရေဘေးရေလွှမ်းမှု နဲ့ရေချောက်သွေ့မှုသက်သာအောင် ရေထိန်း သိမ်းရေး လုပ်နိုင်၊သောက်သုံးရေပို့ပေးနိုင်
In addition toasustainable fuel source, hydropower efforts produceanumber of benefits, such as flood control, irrigation, and water supply.
(စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနတွေကမှားသလား မိုးလေဝသဌာနကဘဲမှန်မလား နှစ်ဌာနကပူးပေါင်းပြီး
David Grey အကြောင်း
David Grey has over 40 years experience in water management and development, living and working in Africa, the Americas, Asia and Europe. He isawater policy analyst, practitioner and researcher, and he has beenamanager of interdisciplinary, multi-national teams and large budgets. He has experience at multiple levels: community/village/farm level in water management, water supply and sanitation, and irrigation; city level in water and wastewater services; all levels of local and national governments in water policies and investments; international basin level in negotiation and dispute resolution, institutional and legal frameworks and cooperative development; continental/regional level in political advocacy and institution building; and global level in promoting paradigm shifts and engaging world political and professional bodies.
He joined Oxford University as Visiting Professor of Water Policy in late 2009 after almost 27 years as staff of the World Bank. He trained asahydrogeologist and was staff of the British Geological Survey for 8 years, including3years as Group Manager of Hydrogeology at BGS Wallingford, responsible for groundwater research and management activities in the UK and internationally. He was the World Bank’s Senior Water Advisor and Chair of its Water Resources Management Group from 2003, with responsibility for corporate water policies and advisory oversight of the water community and the water resources, irrigation, water supply and sanitation and hydropower portfolio.
He has had many affiliations. For example, he has been Board member of the World Water Council, founding member of the Water and Sanitation Collaborative Council, andafounding partner of the Global Water Partnership. Recent roles include: member of the World Economic Forum’s Global Action Council on Water Security; Associate Fellow of the International Institute for Strategic Studies (Chatham House); and member of an International Panel of Experts for the Mekong River Commission.
၊ပြီးတော့ ရကာတ ပုံ က ၁၀၀၆၀ဝ ကျာ် “ကြိုက် like” ကိုနှိပ်ပေးပါ၊
ပီးတော့ အာက်ပါ facebook လင့် နှိပ်ပြီးဝင်ပါ
Facebook ကရေကာ တာပုံကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်
၎င်းပုံအောက်မှာ ၁၅၆၀၀ဝ “ကြိုက်” ကိုရှာပေးပြီး
(အခြားနေရာမှာ “ကြိုက်” ကိုနှိပ်နိုင်သလို ဒီနေရာမှာလဲ”ကြိုက်”ကိုနှိပ် နိုင်ပါတယ်)